ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT- Laboratory “WLAN CPE Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Fri, 03/23/2012 - 20:29
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာ မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော ဦးဇော်ဝင်းထွန်း မှ မတ်လ (၃၁) ရက်တွင် နေ့လည် (၁း၀၀ မှ ၃း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ (၃း၀၀ မှ ၅း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ “WLAN CPE Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ Wireless Networking အသုံးချနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော CPE Configuration ပြုလုပ်ပုံနည်းလမ်းများကို လက်တွေ့စမ်းသပ် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ၊ Network ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး မတ်လ (၃၀) ရက် ညနေ (၃း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT- Laboratory “WLAN CPE Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Cisco-Switch Port Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Sun, 03/18/2012 - 11:39
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(YRCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှု များအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော ဦးအောင်ဇော်မြင့် မှ မတ်လ (၂၄) ရက်တွင် နေ့လည် (၁း၀၀ မှ ၃း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ (၃း၀၀ မှ ၅း၀၀) အထိ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခွဲ၍ “Cisco-Switch Port Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ Cisco Switch များ၏ Interface တစ်ခုစီအား လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အညီ Configuration ပြုလုပ်နိုင်သော နည်းလမ်းများနှင့် အကျိုးကျေးဇူး စသည့်များအား လက်တွေ့စမ်းသပ် ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ၊ Network ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာနေသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး မတ်လ (၂၃) ရက် ညနေ (၃း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Cisco-Switch Port Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
MCPA ICT- LAB တွင် နေ့စဉ် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်
Submitted by zwintun on Thu, 02/02/2012 - 10:22
MCPA အသင်းသားများ၏ ICT ပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ ICT ဆိုင်ရာ Research & Development လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် နှင့် MCPA R & D Center တည်ထောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ICT LAB ကို မြန်မာအင်ဖိုတက်(ခ်)၊ အဆောင်(၁) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
အဆိုပါ ICT-LAB တွင် နေ့လယ် ၁ နာရီမှ ၅ နာရီအထိ သတ်မှတ်ထားသော ခေါင်းစဉ်များကို အသင်းသား တစ်ဦးလျှင် ၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ၂ နာရီကြာ လက်တွေ့လာရောက် စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀) ရက်မှ စတင်ပြီး မိမိအသုံးပြုလိုသည့် ခေါင်းစဉ်ကို တစ်ရက်ကြိုတင်အကြောင်းကြား၍ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းဝင်များ သိရှိစေရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Read more about MCPA ICT- LAB တွင် နေ့စဉ် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်
ICT-Laboratory “ Wireless Hotspot Configuration”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Sat, 10/29/2011 - 21:28
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော ဦးဇော်ဝင်းထွန်း မှ နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Wireless Hotspot Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။
Wireless နည်းပညာကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် Wireless Hotspot များဖန်တီးနိုင်ရန် Wireless Hotspot တည်ဆောက်ပုံများကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရှင်းလင်းပြသပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ နှင့် Network အခြေခံတတ် မြောက်ထားသူများ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉- ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ICT-Laboratory “ Wireless Hotspot Configuration”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Sat, 10/15/2011 - 06:17
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော ဦးအောင်ဇော်မြင့် မှ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ (Internetworking) နှင့် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရန် Routing ပြုလုပ်ပုံများကို Microsoft Windows Platform ပေါ်မှ ပြုလုပ်ထိန်းသိမ်းပုံများကို လက်တွေ့သရုပ်ပြ ရှင်းလင်းသင်ကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မတူညီကွဲပြားသော ကွန်ယက်စနစ် များချိတ်ဆက်ရာတွင် မဖြစ်မနေအသုံးပြုကြသော Router များကဲ့သို့ပင် Microsoft Windows Platform ပေါ်မှနေ၍ Routing Function နည်းပညာများကို အဓိကထား ရှင်းလင်းလေ့ကျင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ နှင့် Network အခြေခံတတ် မြောက်ထားသူများ အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉- ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ICT-Laboratory “ Internetworking and Routing on Microsoft Windows Platform ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Sat, 08/20/2011 - 15:28
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၇) ရက် (စနေနေ့) နေ့လည် (၃း၀၀ မှ ၅း၀၀) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ အခန်း (၂၀၅) တွင် Microsoft Certified Trainer အဖြစ် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လုပ်ကိုင်နေသူ ဦးဇော်ဖြိုးတင်ထွန်းမှ Cloud Computing and Virtualization ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဟောပြောမည့်သူ၏ နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ ယနေ့ခေတ် လူသိအများဆုံးနှင့် အသုံး အတွင်ကျယ် ဆုံးဖြစ်လာမည့် နည်းပညာသစ်များကို တက်ရောက်သူများအား ဆွေးနွေးရှင်းလင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ လက်ရှိ IT လောကတွင် Professional အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ Professional Developer ဖြစ်လိုသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about “Cloud Computing and Virtualization” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
Submitted by tunkhine on Fri, 05/20/2011 - 12:22
Read more about 7th Myamar ICT Exhibition May-2011
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer များ download ရယူနိုင်
Submitted by zwintun on Wed, 06/01/2011 - 14:16
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer များလေ.လာနိုင်ရန်အတွက် အသင်း website http://mcpamyanmar.org/download မှတဆင်. download ရယူနိင်ပါသည်.
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ MCPA Certified Network Associate (NA) old questions and answer များ download ရယူနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Router Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 05/23/2011 - 12:28
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှု များအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးရဲကျော်သိန်း၊ ဦးအောင်ဇော် မြင့် တို့မှ မေလ (၂၈) ရက်တွင် နေ့လည် ၁း၀၀ နာရီ မှ ၅း၀၀ နာရီအထိ “Router Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့ သရုပ်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ နှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ပြီး မေလ (၂၇) ရက် ညနေ (၃း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့ စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း (၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Router Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Fri, 04/08/2011 - 17:23
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ပထမအကြိမ် Developer Conference ( Dev Con 2011 –Yangon) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာ အင်ဖိုတက်ခ်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
Dev Con 2011 –Yangon တွင် အသုံးပြုမည့် Logo Design ကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
- မိမိတို့၏ Logo Design များကို အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ရပါမည်။
- Illustrator or Photoshop with layers preserved and PNG format, 300 DPI resolution
- မည်သူမဆို Design တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပေးပို့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
- Design Logo များကို (E-mail :office@mcpamyanmar.org) သို့ မေလ (၉) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ပေပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ Design လက်ခံရရှိကြောင်း
- အရွေးချယ်ခံရသော Logo အသုံးပြုခွင့် ကို ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသို့ ပေးအပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ရွေးချယ်ခံရသော Logo Designer အား မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းမှ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်နှင့် Logo ပုံစံတူ Trophy အား မှတ်တမ်းတင် ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
- အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း အဆောင် (၄)၊ အခန်း (၄) ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ဖုန်း -၆၅၂၂၇၆ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ 2011 Developer Conference (Dev Con 2011 –Yangon ) အတွက် Logo Design ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း